>ဘကုန်းနဲ့ ဘလောက်ဂါများ | ချမ်းလင်းနေ
Filed under: ကဗျာလေးတွေ — 20 Comments
အို ….. သယ်ရင်း ဘလောက်ဂါတို့ရေ
>ဟုတ်ပ အစ်ကိုရေ . .ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာတော့ လင့်တွေ စစ်ပြီးပြန်ချိတ်ထားပြီ . . . သိတဲ့အတိုင်း လူဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲနေလို့ မရသလို ဘလောက်ဆိုတာကလည်း တစ်ခုထဲနဲ့ အထီးကျန်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်လား အစ်ကိုချမ်းလင်းနေရေအစဉ်အားပေးလျက်လှိုင်ဘွား(သီချင်းအိမ်)
>အင်း…ကောင်းတယ်၊ ကိုလင်းရေ..လူချင်းမတွေ့ ရပေမယ့်ရေးချင်တာခြင်းတူနေတော့ လည်း ၊ ခင်မင်မှုတွေ တိုးခဲ့ ရသလို ပါ။အခု “ ဝဲ ” ကတော့ ၊ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာကျော်မမက စ တယ်ထင်တာပဲ။ သူ့ တော့ မပြောရဲပါဗျာ။တုတ်မှာစိုးလို့ ၊ အဲ .. သူ စ ဖြစ်တာဗျ။သိ သလောက် ..။
>template အသစ်နဲ့လှနေတယ် အစ်ကို။ ခုတလော အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ ကိုယ့်အိမ်တောင် ကိုမရောက်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ လာလည်ပြီး ကွန်မန့်တွေ အများကြီး ပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ။ မိသားစုအားလုံး သာယာချမ်းမြေ့ပါစေ… ခွန်
>ဟုတ်ပ အစ်ကိုရေ . .ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာတော့ လင့်တွေ စစ်ပြီးပြန်ချိတ်ထားပြီ . . . သိတဲ့အတိုင်း လူဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲ နေလို့ မရသလို ဘလောက်ဆိုတာကလည်း တစ်ခုထဲနဲ့ အထီးကျန်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်လား အစ်ကိုချမ်းလင်းနေရေ အစဉ်အားပေးလျက် လှိုင်ဘွား(သီချင်းအိမ်)
>ရေချိုးပြီးလို့ ဆပ်ပြာတောင် တိုက်ထားပါသေးတယ်ဗျာခင်မင်စွာဖြင့် ရွှေစင်ဦး
>ရေချိုးတယ် ချပ်ပါ တောင် တိုက်လိုက်သေးတယ်။
>၀လုံးနဲ့ဘလောက်ဂါများ…ဆိုရင်ပိုမှန်မယ်ထင်တယ်… 🙂 အခုတလောဘလောက်ဂါတွေအိမ်ပြင်ကြတယ်နော်
>တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးကို အလေးထားသူတွေလဲ ရှိပါတယ်ဗျား 😛
>ဒီကဗျာ စပ်မိမှပဲ ဝဲက ပြန်ကူးလိုက် ပြန်ဖြုတ်လိုက်နဲ့ ရှုပ်နေတာပဲ။ ကျွန်တော်ဆီမှာ ကူးတာက ကွန်မာန့်တွေဆီကနေ လာတာ။ ကွန်မန့်တွေ ပေးသွားချင်ရင် Name/ URl ကနေ အမည်လေးပဲ တပ်ပြီး ပေးကြတော့ ဝဲကူးမှု ကင်းဝေးတာပေါ့ဗျာ။
>အတူတူပဲ ကိုချမ်းရ .. ကျွန်တော့်ဆီမှာလည်း ကွန်မန့်ကလာတာ … ဖျက်ရအုန်းမယ် .. အလုပ်ကို ရှုပ်နေတာပါပဲဗျာ …း(
>ဖတ်ပြီး ပြုံးမိတယ်…း))
ကျနော်သဘောကျ လို့ ဖေ့ဘွတ်မှာ ရှယ်လိုက်ပါတယ်နော် ။
« >မိဘနှင့် သားသမီးဆိုး